Spin For Big Win! - Myanmar Sports
🎁 SPIN FOR BIG WIN! 🎁
💰 € 3,000 ( ယူရို ၃,၀၀၀ ) အထိ ရရှိနိုင်မယ့် Spin For Big Win! ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဥ် 💰
Spin For Big Win ပရိုမိုးရှင်းမှာ ပါဝင်ကစားပြီး € 3,000 ( ယူရို ၃,၀၀၀ ) ဆုကြေးကြီးထဲက တစ်ခုကို အခုချက်ချင်းပဲ ကံစမ်းရယူလိုက်ပါ။
🕡 ပရိုမိုးရှင်းကာလ 🕡 ( 20. 06. 2022 – 30. 06. 2022 )
အချိန်ကာလကတော့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့၊ မနက် ၆ နာရီ ၃၁ မိနစ် ( 20 June 2022 00:01 GMT ) ချိန်ကနေ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့၊ မနက် ၆ နာရီ ၂၉ မိနစ် ( 30 June 2022 23:59 GMT ) ချိန်အတွင်းသာ အကျုံးဝင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
🏆 အဆင့်အလိုက် ချီးမြှင့်သွားမည့် Spin For Big Win! ဆုကြေးများ 🏆
ဆုကြေးများ ( prizes Spin For Big Win! ) ကို အောက်ပါအတိုင်း အဆင့်အလိုက် ချီးမြှင့်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ။
ပထမဆု – € 700 ( ယူရို ၇၀၀
ဒုတိယဆု – € 500 ( ယူရို ၅၀၀
တတိယဆု – € 400 ( ယူရို ၄၀၀
စတုတ္ထဆု – € 300 ( ယူရို ၃၀၀
၅ ကနေ ၁၀ နေရာ – € 100 ( ယူရို ၁၀၀
၁၁ ကနေ ၂၀ နေရာ – € 50 ( ယူရို ၅၀
Qualifying 1xBet “ Spin For Big Win! ” games: အကျုံးဝင်တဲ့ ဂိမ်းတွေကတော့ –
Hot fruits on fire – အစ,ရှိတဲ့ ‌ဂိမ်းတွေမှာ ဆော့လို့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ။
ဂိမ်းတွင်းတူးလ် သတ်မှတ်ချက် – သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဂိမ်းတွေမှာ ကစားပြီး € 1 ( ၁ ယူရို
) အနိုင်ရတိုင်း ၁၀၀ ပွိုင့် ( 100 Points ) ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခုချင်း အလောင်းအစားတွေကို ပေါင်းစပ်လို့ မရပါ။
ဒီ Spin For Big Win ကမ်းလှမ်းချက်မှာ ဘယ်သူတွေ ပါဝင်လို့ရနိုင်မလဲ?
၄။ အခု ကမ်းလှမ်းချက် ( Spin For Big Win 1x bet ) မှာ စာရင်းသွင်း (အကောင့်ဖွင့်) ထားသော ကတ်စတန်မာများသာ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
၇။ အခု ပရိုမိုးရှင်း ( 1x Bet Spin ) တွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းသည် ကမ်းလှမ်းချက်၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ဖတ်ပြီး လက်ခံကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။
ဒီ Spin For Big Win ပရိုမိုးရှင်းမှာ ရရှိနိုင်တဲ့ အရေအတွက် ကန့်သတ်ချက်
၈။ ဒီပရိုမိုးရှင်း ( Spin Offer 1x bet ) အတွက် အောက်ပါတစ်ခုစီတိုင်းလျှင် တစ်ကြိမ်သာ ရရှိနိုင်သည်။
၉။ တကယ်လို့ ကတ်စတန်မာ တစ်ဦးက ဤပရိုမိုးရှင်း၏ ရှုထောင့်တစ်ခုခုကို အလွဲသုံးစားပြုရန် သို့မဟုတ်၊ ကြိုးကိုင်ရန် ကြိုးပမ်းမှု သို့မဟုတ် ကာစီနို ( 1xBetcasino ) စည်းမျဉ်းများကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း တွေ့ရှိပါက ကုမ္ပဏီသည် ၎င်းကတ်စတန်မာ၏ ပရိုမိုးရှင်း ( 1xBet casino games Offer ) တွင် ပါဝင်ခြင်းကို ငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
၁၀။ 1xBet သည် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နှင့်မဆို ကတ်စတန်မာများ၏ ငွေသွင်းငွေထုတ်မှတ်တမ်းများနှင့် (Log in) လော့ဂ်အင် မှတ်တမ်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ ထို့သို့ပြန်လည် သုံးသပ်ပြီးနောက် ကတ်စတန်မာတစ်ဦး သို့မဟုတ် တစ်ဦးထက်ပိုသော ကတ်စတန်မာများက ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြင့် ကစားသည့် နည်းလမ်း မမှန်မကန်လုပ်သည်ဟု 1xBet မှ စုံစမ်းတွေ့ရှိပါက 1xBet သည် ထိုကဲ့သို့သော ကတ်စတန်မာများ၏ ပရိုမိုးရှင်း ( 1xBet June 2022 Offer ) အတွက် ရပိုင်ခွင့်များကို ရုတ်သိမ်းပြီး ဘောနပ်စ် ( casino bonus 1xbet ) များကို ပြန်လည်ပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
၁၂။ ပြိုင်ပွဲ၏ စည်းမျဉ်းများ ( Terms of Offer ) ကို ပြောင်းလဲရန်၊ ပြိုင်ပွဲကို အချိန်မရွေး ဆိုင်းငံ့ရန် သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းရန် ကျွန်တော်တို့ 1xBet ကုမ္ပဏီမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
အရင်ပုံမှန်ရနေကျ ဘောနပ်စ်တွေတုန်းကလို မဟုတ်ပဲ ဆုကြေးတွေကို ထုတ်ယူဖို့ ဘယ်လောင်းကစားမှ ကစားပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ ချက်ချင်း ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ ပရိုမိုးရှင်းပြိုင်ပွဲလေး ( Mancala Gaming Tournament 1x Bet ) က စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာမို့လို့ ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်ပြီး ဆုကြေးတွေကို ရယူဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျ။